एनआइसी र बैंकर्स संघ बिचको विवादले बैक कारोवार रोकियो - InHeadline
By Anu Rana on Mar 10,2018 - 21:12
एनआइसी एसिया बैंकले शुक्रबारदेखि बचत र मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाएपछि बैंकबीच विवाद चर्केको छ । एनआइसीले बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेपछि अन्य बैंकले यो धेरै भएको भन्दै विवाद झिकेका हुन्। एनआइसी एशिया बैंकलाई भद्र सहमतिविपरीत ब्याजदर बढाएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)ले अन्तरबैंक कारोबारमा सहभागी नगराउन भनेर २७ वटा बैंकलाई पत्र पठायो । ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार एनबिएले राख्नसक्छ ? यसले आगामी दिनमा कस्तो परिस्थिति निम्त्याउन सक्ला ?
कहरुबीच बचत खातामा ८ प्रतिशत र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा ब्याज नबढाउने भद्र सहमति भएको थियो। एनआइसीले ब्याजदर बढाएपछि सहमति तोडेको भन्दै ऊसँग कुनै पनि कारोबार नगर्ने निर्णय बैंकर्स संघले गरेको छ।
यता एनआइसी बैंकले भने ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्नु गलत भएको बताउँदै यसले खुला बजार नीतिको उपहास गर्ने र ‘बैंकर्स संघको निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ । बैंकहरुको नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने बजारले नै ब्याजदर तोक्ने हुनाले र यो बैंकहरुको आपसी विषय भएकोले यस विषयमा राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छ ।
‘जोखिम बढेकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘कार्टेलिङ गर्न खोजेको होइन।’यस प्रकरण पछि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको वर्षौंदेखिको कार्टेलिङ छरपष्ट भएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले चालेको कदमलाई बैंकर्स संघको कार्टेलिङविरुद्धको लडाईका रुपमा धेरैले बुझेका छन् । एनआइसी बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्नु गलत भएको बताउँदै यसले खुला बजार नीतिको उपहास गर्ने बताए। ‘बैंकर्स संघको निर्णय हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बजारले नै ब्याजदर तोक्ने हुनाले यस विषयमा राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप नगर्ने बताए। ‘दुवैका कुरा आफ्नो ठाउँमा ठीक छन्,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षका कुरा सुन्ने हो तर यति दिन पाउँछस् भनेर हामीले भन्न मिल्दैन।’ मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले पनि कार्टेलिङ जारी छ। यातायात, कृषि, हवाईसेवालगायत अधिकांश क्षेत्रमा कार्टेलिङ गरिएजस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि वर्षौंदेखि ब्याजदरमा कार्टेलिङ हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण यो विवाद उठेको हो।
के हो अन्तर बैक कारोवार ?
अन्तर बैक कारोवार भनेको एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग गर्ने कारोवार हो । कहिलेकाही कुनै बैंकमा तरल रकम अभाव हुदा त्यो बैंकले सापटीकोरुपमा दोस्रो बैंकसँग रकम सापटी लिन्छ । त्यो नै अन्तर बैक कारोवार हो । यस्तो कारोवारमा न्युनतम शुन्य दसमलव ५० देखि एक प्रतिसत व्याज तोकिएको हुन्छ । यस्तो कारोवारको अवधि पनि अल्पकालिन हुन्छ । अर्थात दुई दिन, पाँच दिन एक हप्ता दुई हप्ता आदि ।
अन्तर बैक कारोवार मात्र रोकिंदा कारोवार रोकिएको बैंकलाई खासै त्यति ठुलो असर पर्देन । तर उसले आफुसँग तरल रकम भने पर्याप्त मात्रमा राख्नु पर्छ । जस्तो हामीले कसैसँग केही समयको लागि निश्चित रकम सापटी लिए जस्तै हो अन्तर बैक कारोवार । तर हामीसँग पर्याप्त रकम छ भने हामीले सापटी लिनु पर्देन ।
ट्याग - अन्तर बैक कारोवार , एनआइसी एसिया बैंक , विवाद